တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Narendra Damodardas Modi အား ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံ ~ Myanmar Online News
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Narendra Damodardas Modi အား ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံ
အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Narendra Damodardas Modi အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ၀န်ကြီးချုပ်၏ အိမ်တော်၌ သွားရောက် ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များအား ဆက်လက်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့ တပ်မတော်စွမ်းရည်တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ဆက်လက်တိုးမြှင့် ကူညီပေးသွားမည့်အခြေအနေ များ၊ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင်၊ စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(ရေ) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးအောင်၊ စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ်(လေ)ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းအောင်၊ မြန်မာစစ်သံ (ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဇော်တို့ တက်ရောက်ကြပြီး အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး ၀န်ကြီး H.E.Mr. Ajit Kumar Doval၊ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mr. Shri Shripad Yesso Naik၊ အိန္ဒိယတပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Bipin Rawat ၊ အိန္ဒိယ တပ်မတော်ရေတပ်ဦးစီးချုပ် Admiral Karambir singh တို့အား သီးခြားစီတွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ခိုင်မာအောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်များ၊ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၏ Act East Policy အရ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေကောင်း ပီသစွာဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေများ၊ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ လုံခြုံရေးအတွက် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် အခြေအနေ များအား ဆွေးနွေးပြောကြား ခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲများအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ အထိမ်း အမှတ် တံဆိပ်များပေးအပ်ပြီး အပြန်အလှန် ပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။